Wednesday July 22, 2020 - 17:46:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saaka waxa garoonka magaalada hargeysa ee maamulka somaliland kasoo degay wefti uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda dawladda itoobiya ee Axmed Shide, lama oga waxa ay ka wada hadli doonaan maamulka somaliland iyo itoobiya balse waxa la rumeysan yahay
Saaka waxa garoonka magaalada hargeysa ee maamulka somaliland kasoo degay wefti uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda dawladda itoobiya ee Axmed Shide, lama oga waxa ay ka wada hadli doonaan maamulka somaliland iyo itoobiya balse waxa la rumeysan yahay in imaatinkani xidhiidh la leeyahay khilaafka webiga niilka ee masar iyo itoobiya.
Todobaad kahor uun bay ahayd markii wefti masaari ah oo isugu jira saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin siyaasadeed yimaadeen hargeysa markaasoo taariikhdu ahayd 15 julaay ee bishan aynu ku jirno.
Ismaamdhaafka u dhexeeya masar iyo dawladda xabashida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareeray kadib markii reysal wasaare Abiy Axmed uu ku dhawaaqey in la buuxin dooni biyo xidheenka.
War saxaafadeed xalay kasoo baxay xafiiska reysal wasaaraha ayaa lagu sheegay in labadii todobaad ee ina dhaafey la buuxiyey wejigii hore ee biyaxidheenka taas oo ay ugu wacnayd roobab ka da’ay waddanka sida lagu sheegay warsaxaafadeedka.
Sidoo kale waxa war saxaafadeedka lagu sheegay in saddexda waddan ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya gaadheen wada hadal Win-win solution ah ama waddankasta guuli ay ugu jirto.
Itoobiya ayaa ku doodaysa in koronto la’aanta waddankeeda ka jirta iyo baahida loo qabo in koronto ay u dhoofiso wadamada jaarkeeda ah darteed ay u samaynayso buuxinta biyo xidheenka halka masaariduna ay aad ugu tiirsan yihiin biyaha webiga oo aanay lahayn il dhaqaale oo lamid ah biyaha niilka. Si kastaba ha ahaatee lama oga waxa khilaafkani ku dambayn doono.
W/ Wadaad Yare Xaashi
Akhlaaq xumada iyo dhalan rogga umadeed ee ka jira magaalada Hargeysa [Dhageyso Barnaamij].
Al Shabaab oo Wasiir katirsan maamulka Hirshabelle ku dilay magaalada Jowhar.
Wasiir ay isku dhowaayeen Saciid Deni oo ku dhintay magaalada Garoowe.